Mampanahy ny fifampikasohana sy fifaneraserana: mitombo isanandro ka tafakatra 88 ireo tratran’ny coronavirus | NewsMada
Mampanahy ny fifampikasohana sy fifaneraserana: mitombo isanandro ka tafakatra 88 ireo tratran’ny coronavirus
Par Taratra sur 08/04/2020
Nitondra ny tatitry ny fitiliana teny amin’ny Institut Pasteur (IPM) ny mpitondra tenin’ny Foibe fibaikoana ny ady amin’ny covidi-19, omaly. Mitombo isanandro ny isan’ireo olona tratran’ny coronavirus noho ny fifampikasohana sy fifaneraserana « cas contact ».
Mihamaro ireo tratry ny valanaretina noho ny fifaneraserana. Olona enina hafa indray no voan’ny coronavirus ka telo avy any Toamasina ary ny telo hafa avy eto Antananarivo, araka ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololon­tiana Hanta. Ahitana lehilahy efatra : 20, 39, 37 ary 43 taona raha roa ny vehivavy ka 52 sy 55 taona izy ireo.
Tsy mitombina ny fisian’ny matin’ny coronavirus
Tafakatra 88 izany ireo notiliana ka mitondra ny coronavirus, manerana ny Nosy. Iray amin’ireo ihany no tratry ny fahasemporana ka mila « oxygene ». Nitondrana fanazavana momba izany ny eo anivon’ny CCO. Eo koa ny nama­liany ny tsaho miely. « Efa an-dalam- pitsaboana azy isika izao… Tsy marina ny filazana fa nisy olona roa maty araka voalaza any anaty tambajotran-tserasera. Tsy misy ny aina nafoy fa tsy maintsy entina eto ihany raha sanatria misy izany. Enga anie ho sitrana avokoa izy rehetra », hoy izy. Tato anatin’ny roa andro izao, 6 sy 10 ireo tratran’ny covid-19.
Fito ireo olona sitrana tanteraka
Na izany aza anefa, nisy olona na­rarin’ny coronavirus miisa 5 indray sitrana sy nivoaka ny hopitaly teny Anosiala sy Andohatapenaka ary teny Ilafy, omaly. Efa nody tamin’ny heri­nandro lasa koa ireo pasitera mivady rehefa sitrana. 7 izany izao ireo sitrana soamantsara ka 81 sisa ireo mbola eny amin’ny hopitaly, tsaboina sy arahi-maso.
34 ireo tratry ny covid-19 noho ny « cas contact »
Etsy andaniny, miisa 54 amin’ireo 88 tratran’ny covid-19 tonga tamin’ny zotra avy any ivelany raha 34 kosa ireo voan’izany teto an-toerana vokatry ny fifampikasohana sy fifaneraserana « cas contact ». Nanamafy ny eo anivon’ny CCO ny amin’ny tokony hanarahana tsara ny fepetra sy ny toromarika, manoloana izao fitombon’ny isan’ireo tatran’ny covid-19 vokatry ny fifaneraserana izao. « Tsy misy ahalalana izany valanare­tina izany ety ivelany ka aoka tsy hivoaka ny trano. Mampiasa arovava raha tsy maintsy hivoaka… Sasana ny akanjo ary ahahy amin’ny masoandro… », hoy izy.
Tsenan’i Mahamasina: Tratran’ny polisy ireo vehivavy mpanendaka sy mpangarom-paosy 22/01/2021
Plus de 200 collaborateurs pour 18 sénateurs: La HCC émet des réserves 22/01/2021
VAOVAON’NY KITRA 22/01/2021
Basikety-N1A: hihaona amin’ny ampahefa-dalana ny GNBC sy MB2All 22/01/2021
Rugby U20: hisy ny fifantenana mpilalao ho Makis 22/01/2021